ရာသီအကူးအပြောင်းကြောင့် လည်ချောင်းနာနေပြီဟုတ်..... - Hello Sayarwon
မိုးလေးကုန်လို့ ဆောင်းကိုကူးဖို့ ရာသီဥတုကူးပြောင်းမှုလေးက အစချီနေချိန်မှာ ပြောင်းလဲမှုကိုမခံစားနိုင်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က လည်ချောင်းနာတာကိုခံစားနေရပြီဟုတ်။ ညအိပ်တုန်းက အကောင်းကြီးပါ။ မနက်နိုးမှဘဲ လည်ချောင်းထဲက နာချင်သလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်များခံစားနေရပြီလား Helloဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးရေ…. ဒီခံစားမှုကို သက်သာစေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ခပ်ဝေးဝေးနေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ခံစားရတဲ့ လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေဖို့ ဘာတွေဂရုစိုက်ရမလဲ……….
ရာသီအကူးအပြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေဖို့နဲ့ မခံစားရစေဖို့ဆိုရင်တော့
အိပ်ရေးဝတာကလည်း ခန္ဓါကိုယ်ကို ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး ရောဂါပိုးတွေကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်တိုက်ထုတ်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ချိန်၊ ဖုန်းသုံးချိန်နဲ့ ဂိမ်းဆော့ချိန်တွေကိုလျှော့လို့ ညတိုင်း အိပ်ချိန် ၈ နာရီပြည့်ဝအောင်ထားပေးပါ။
ခန္ဓါကိုယ်ကျန်းမာစေဖို့ မေ့ထားလို့မဖြစ်တဲ့အခက်တစ်ခုပေါ့။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့တာမှာ ခန္ဓါကိုယ်အတွက်လိုအပ်မယ့် အာဟာရတွေကို ပြည့်ဝအောင်စားပေးပါ။ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၂ နပ်တော့ ပြည့်ပြည့်ဝဝစားပေးပါ။ အသား၊ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝစားပေးပါ။
ပုံမှန် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေသူတွေက ဖျားနာခဲကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူတို့က အခြားသူတွေထက် ကိုယ်ခံအားပိုကောင်းနေတတ်ကြတာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို မအားဘူးဆိုရင်တောင်မှာ ၁၅ မိနစ် ကနေ နာရီဝက်လောက်အထိ ပုံမှန် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။
ရေနွေးခပ်နွေးနွေးလေးထဲကို ပျားရည်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ သံပရာသီးတစ်စီတ်စာလောက်ညှစ်ထည့်ပြီး သောက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို တစ်ခွက်လောက်သောက်ပေးတာက ကိုယ်ခံအားကောင်းစေနိုင်သလို လည်ချောင်းနာတာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
ချင်း (ဂျင်း) ပြုတ်ရည်သောက်ပါ
ချင်း (ဂျင်း) ကကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်လောက် ချင်း (ဂျင်း) ပြုတ်ရည် သောက်ပေးပါ။
ရေ၊ စွပ်ပြုတ်နဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်လိုမျိုး ခန္ဓါကိုယ်အတွက် ရေဓါတ်ရရှိစေမယ့် သောက်စရာတွေကိုသောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။ လည်ချောင်းမှာ အစိုဓါတ်ရှိနေတာက လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ အရည်ဆိုလို့ကော်ဖီတွေ၊ လက်ဖက်ရည်တွေတာ့မသောက်ပါနဲ့။ ကဖင်းပါတဲ့ အချိုရည်တွေနဲ့ အရက်၊ဘီယာတို့ကိုလည်းရှောင်ပေးပါနော်။
ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရိုးစင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် လက်ကို ညစ်ပေတဲ့အခါတိုင်းနဲ့ အစားမစားခင်တိုင်းမှာ လက်ကိုသေချာလေသန့်စင်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ရေနွေးကြမ်းခပ်နွေးနွေးလေးသောက်ပေးတာက လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်ချောင်းနာတဲ့အခါ ရေနွေးခပ်နွေးနွေးလေးသောက်ပေးပါ။
လွယ်ကူရိုးစင်းတဲ့အိမ်တွင်းနည်းတစ်ခုပေါ့။ ရေနွေးတစ်ခွက်စာထဲကို ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့ လေးပုံတစ်ပုံစာလောက်ထည့်ပြီးနှံ့အောင်မွှေလိုက်ပါ။ ခပ်နွေးနွေးအခြေအနေမှာ အာလုပ်ကျင်းပေးပါ။ လည်ချောင်းနာတာကို ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေမှာပါ။
အစိုဓါတ်ရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေနိုင်တဲ့အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်ချောင်းနာတဲ့အခါ ကိုယ်ရှိနေတဲ့အခန်းထဲမှာ အစိုဓါတ်ထိန်းကိရိယာလေးဖွင့်ထားပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
လည်ချောင်းနာတဲ့အခါ ရေနွေးနဲ့ရေချိုးပေးတာကလည်း ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့။ ဒီလိုရေချိုးပေးတာက လည်ချောင်းအတွင်းနံရံတွေရောင်ရမ်းတာကိုလျော့ပါးသက်သာစေပြီး လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ရေနွေးကအရမ်းပူဖို့တော့မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ရေနွေးငွေ့လေးတွေထွက်နေဖို့တော့လိုပါမယ်။
လည်ချောင်းနာတာကို သကာ်စေဖို့အတွက် ဓါတ်စာတစ်ရပ်အနေနဲ့ ငှက်ပျောသီးကို စားပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်ချောင်းနာနေတယ်ဆိုရင် ငှက်ပျောသီးကို ဒီအတိုင်းစားတာဖြစ်ဖြစ် ဖော်ျပြီးသောက်တာဖြစ်ဖြစ် စားပေးလို့ရပါတယ်။
သလဲသီးဖျော်ရည်က လည်ချောင်းနာတာကို ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို တိုက်ထုတ်ပေးပြီး တစ်ရှုးတွေ ရောင်ရမ်းတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်ချောင်းနာနေတယ်ဆိုရင် သလဲသီးဖျော်ရည်လေးကို သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကဲ…ရာသီအကူးအပြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လည်ချောင်းနာတာကို အကောင်းဆုံး ကာကွယ်တုံ့ပြန်ကြရအောင်လား……..
Foods to eat and drink when you haveasore throat https://www.medicalnewstoday.com/articles/315937.php Accessed Date 26 September 2019
Understanding Sore Throat — Prevention https://www.webmd.com/cold-and-flu/understanding-sore-throat-prevention Accessed Date 26 September 2019